Manni Maree Federeshinii Ityoophiyaa naannoon Tigiraay filannoo gaggeessuuf qophii itti jiru hatattamaan akka dhaabu gaafate – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Manni Maree Federeshinii Ityoophiyaa naannoon Tigiraay filannoo gaggeessuuf qophii itti jiru hatattamaan akka dhaabu gaafate
On Aug 1, 2020 786
Finfinnee, Adoolessa 25, 2012 (FBC) – Manni Maree Federeshinii Ityoophiyaa naannoon Tigiraay filannoo gaggeessuuf qophii itti jiru hatattamaan akka dhaabu gaafate.
Naannichi Sirna heeraa balaarra buusuuf adeemsa eegaleen kan itti fufu yoo ta’e manni marichaa aangoo heera biyyaattiin kennameef akkasumas seerota biroorratti hundaa’uun tarkaanfii akka fudhatullee beeksiseera.
Haata’uuti, mootummaan naannoo Tigiraay murtoo kana cinaatti dhiisuun filannoo gaggeessuuf murteessee sochii gochaa jira kan jedhe manni marichaa heeraa mootummaa keyyata 102 filannoo fedeeraalaa fi naannoo bilisaa fi sirriin gaggeessuu kan danda’u boordii filannoo biyyaalessaa qofa akka ta’e fi boordiin filannoo sadarkaa naannootti akka hin jirre eereera.
Manni maree federeeshinii xalayaa mootummaa naannoo Tigiraayiif barreesseen sochii yeroo ammaa naannichi taasisaa jiru faallaa heera biyyaa, sirna heera biyyaarratti hundaa’e balaarra kan buusuufi sirna federaalaa biyyattii kan miidhudha jedheera.
Dabalatanis akkaataa seera mootummaa keeyyata 50(8) aangoo mootummaa federaalaaf kennameen naannooleetti kabajamuu kan qabuu fi olaantummaa seeraa keeyyata 9(1) jalatti taa’een murtoon seeraa ykn qaama mootummaa kamiyyuu seera mootummaa waliin kan walfaallessu yoo ta’e itti fufiinsa kan hin qabannee ta’uu beekuun mootummaan naannichaa murtoo seera mootummaa fi mana maree federeeshiinii akka kabajuu fi sochii seeraan alaa jalqabe akka dhaabuu jechuun manni mariicha hubachiseera.
Jiraattonni godina Arsii Lixaa aantummaa Raayyaa Ittisa biyyaatiif qaban hiriiraan…
Magaalaa Asallaatti hirirri deeggarsaa Raayyaa Ittisaa Biyya gaggeefame
Magaalota naannoo Amaaraa garaagaraatti hiriirri mormii garee ABUT fi deeggarsi…
Magaalaa Dirree Dawaatti hiriirri mormii garee ABUT fi deeggarsi Raayyaa Ittisaa…
Abbaan Alangaa namoota galmee Dooktar Dabratsiyoonfaa…
Gareen Shororkeessaa ABUT diina ummata Tigraay ta’uu ifatti…
Godina Jimmaatti balaa Bakakkaan lubbuun namoota 4 darbe
Jiraattoonni Godina Arsii fi Jimmaa gooticha Raayyaa Ittisa…
Jiraattonni godina Arsii Lixaa aantummaa Raayyaa Ittisa…
Magaalaa Asallaatti hirirri deeggarsaa Raayyaa Ittisaa Biyya…
Magaalota naannoo Amaaraa garaagaraatti hiriirri mormii…
Oduu biyya keessaa8049